The fish meal plant line including the machines below: 1.Crusher and metal detector 2.Fish cooker 3.Press 4.Dryer 5.Cooling and milling 6.Waste gas treatment Compare with other supplier’s machine,our machine have the feathers below: 1.High quality steel,firm and safety,strict quality test...Sii akhriso »
H5N1 oo ka dilaacay hargabka avian-ka ee Hungary
Waqtiga boostada: Juun-15-2022
Hargabka avian-ka ee H5N1 ayaa ka dillaacay Hungary Sida laga soo xigtay Ururka Adduunka ee Caafimaadka Xoolaha (WOAH), Juun 10, 2022, Wakaaladda Badbaadada Silsiladda Cuntada ee Wasaaradda Beeraha Hungarian ayaa WOAH ku wargelisay in uu dillaacay H5N1 hargabka avian-ka ee aadka u faafa. aniga...Sii akhriso »
Cudurka cagaha iyo afka oo ka dillaacay Zimbabwe
Waqtiga boostada: Meey-30-2022
Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Xoolaha Adduunka (OIE), May 24, 2022, Wasaaradda Dhulka, Beeraha, Kheyraadka Biyaha iyo Dib-u-dejinta Miyiga ee Zimbabwe ayaa OIE ku wargelisay OIE in cudurka cagaha iyo afka uu ka dillaacay Zimbabwe. Dagaalkan ayaa ka dhacay degmada Guriceel iyo degmada Ceelwaaq...Sii akhriso »
Gabon oo ka dillaacay H5N1 hargabka avian-ka oo aad u xanuun badan
Waqtiga boostada: Meey-24-2022
Gabon oo ka dillaacay H5N1 hargabka avian-ka oo aad u faafa Sida laga soo xigtay Ururka Adduunka ee Caafimaadka Xoolaha (OIE), May 19, 2022, Wasaaradda Beeraha ee Gabon ayaa OIE ku wargalisay in uu ka dillaacay Hargabka Avian-ka ee H5N1 ee Gabon. Xanuunka dilaaga ah ayaa ka dhacay deegaanka Nuux, wuxuuna...Sii akhriso »
H5N1 oo ka dillaacay hargabka avian-ka ee Jamhuuriyadda Czech
Waqtiga boostada: Meey-17-2022
H5N1 waxa uu ka dilaacay Czech Republic sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Xoolaha Adduunka (OIE), May 16, 2022, Maamulka Caafimaadka Xoolaha ee Czech ayaa u sheegay OIE in dillaaca H5N1 uu ka dhacay Jamhuuriyadda Czech. ...Sii akhriso »
Cudurka Newcastle oo ka dilaacay Colombia
Waqtiga boostada: Meey-11-2022
Cudurka Newcastle oo ka dillaacay Kolombiya Sida laga soo xigtay Ururka Adduunka ee Caafimaadka Xoolaha (OIE), May 1, 2022, Wasaaradda Beeraha iyo Horumarinta Reer Miyiga ee Colombia ayaa OIE ku wargelisay OIE in cudurka Newcastle uu ka dillaacay Colombia. Cudurka ayaa ka dilaacay magaalada Morales ee...Sii akhriso »
Ka dillaacay hargabka avian-ka ee aadka u faafa ee Hokkaido, Japan, ayaa horseeday in la dilo 520,000 oo shimbiro ah.
Waqtiga boostada: Abriil-30-2022
An outbreak of highly pathogenic avian influenza in Hokkaido, Japan, led to the culling of 520,000 birds More than 500,000 chickens and hundreds of emus have been culled in Two poultry farms in Hokkaido, Japan’s Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry announced Thursday, Xinhua ...Sii akhriso »
Hargabka avian-ka ee H5N1 ayaa ka dillaacay dalka Hungary
Waqtiga boostada: Abriil-16-2022
Hargabka avian-ka ee H5N1 ayaa ka dilaacay dalka Hungary Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Xoolaha Adduunka (OIE), Abriil 14, 2022, Waaxda Badbaadada Silsiladda Cuntada ee Wasaaradda Beeraha Hungarian ayaa OIE u sheegtay, inf...Sii akhriso »
Waqtiga boostada: Abriil-09-2022
Soo koobida qandhada Doofaarka Afrika oo dillaacday Maarso 2022 Toban kiis oo qandhada doofaarka ee Afrikaan ah (ASF) ayaa laga soo sheegay dalka Hungary 1-dii Maarso Toddoba…Sii akhriso »
Dhimashada hargabka avian-ka ee xooluhu waa in ay ahaataa nadiifin heerkul sare ah daaweyn xiran
Waqtiga boostada: Abriil-01-2022
Waaxda Beeraha ee Nebraska ayaa ku dhawaaqday kiiskii afraad ee hargabka shimbiraha ee gobolka ee dhabarka dambe ee beer ku taal degmada Holt. Weriyeyaasha Nandu ayaa ka bartay Waaxda Beeraha, Mareykanka ayaa dhawaanahan 18 gobol uu ka dillaacay hargabka shimbiraha. Nebras...Sii akhriso »
Hargabka Avian-ka oo ka dillaacay Filibiin ayaa dilay 3,000 oo shimbiro ah
Waqtiga boostada: Mar-26-2022
Avian flu outbreak in Philippines kills 3,000 birds According to the World Organization for Animal Health (OIE), on March 23, 2022, the Philippine Department of Agriculture notified OIE that an outbreak of H5N8 highly pathogenic avian influenza occurred in the Philippines. The outbr...Sii akhriso »
Qiyaastii 12,000 oo doofaarro ah ayaa u dhintay qandhada doofaarka oo ka dillaacday beer doofaar oo ku taal Japan
Waqtiga boostada: Mar-18-2022
Sida laga soo xigtay warbixino dhammaystiran oo warbaahinta Japan ah, 12-kii, Miyagi Prefecture, Japan ayaa sheegtay in cudurka qandhada doofaarka uu ka dhacay beer doofaar oo ku taal gobolka. Waqtigan xaadirka ah, wadar ahaan 11,900 oo doofaarro ah oo ku jira beerta doofaarka ayaa la jaray. Maalintii 12-aad, Miyagi Pre...Sii akhriso »
123456Next> >> Bogga 1/6